ट्रेकिङ गाइडको कथा | eAdarsha.com
ट्रेकिङ गाइडको कथा
पोखरा । फेवाताल किनारमा घुम्दै जाने क्रममा बावुराम बिकलाई कसैले सोध्यो–
भाइ ! ट्रेकिङ जाने हो ?
पोखराको एउटा कम्पनीमा मासिक मात्र १५ सयमा सुरक्षागार्डको रुपमा दैनिक १२ घण्टासम्म खटिने बावुरामले ट्रेकिङ अर्थात् पदयात्रा शब्द सुने पनि के कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव थिएन । गोराहरु (विदेशी पर्यटक) सँग घुम्न पाइने, अंग्रेजीमा बातचित गर्नुपर्ने, नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्न पाइने र पैसा पनि मनग्ने कमाउने सकिनेसम्म उनले बुझेका थिए ।
प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै बावुरामले ‘हुन्छ नि । बरु कहाँ जाने होला ?’
त्यसबेला अन्नपूर्ण बेस क्याम्प (एबिसी) ट्रेकिङ जानुपर्ने रहेछ । चिनियाँ ८ जनाको समूहलाई लिएर । पोर्टर (हाल सपोर्टर भनिने) बनेर २६ वर्षीय उनी एबिसी जाने भए ।
१५ वर्षअघि पोर्टर बनेर ट्रेकिङ क्षेत्रमा छिरेका बावुराम अहिले चल्तीका ट्रेकिङ गाइड हुन् । दुखमा पनि मुस्काउन नछोड्ने उनी अंग्रेजी राम्रै बोल्छन् । नजानेको, नगएको सायदै ठाउँ होला । उनी ट्रेकिङ गाडइमात्र हैन, लेकसाइडस्थित ट्रेकिङ कम्पनी ट्रेकिङ टाइमका सञ्चालकसमेत हुन् । मासिक एक डेढ लाख रुपैयाँ सजिलै कमाउने उनी २ वर्षदेखि पूर्ण रुपमा बेरोजगार छन् ।
उनी जसरी सहजैरुपमा यो पेसामा छिरे, उसैगरी निस्कनेवाला छन् ।
‘ट्रेकिङ व्यवसाय चौपट भयो नि,’ कुराकानीक्रममा उनले दुःखेसो पोखे, ‘२ वर्षदेखि यो कोरोना महामारीले सबैतिर प्रभाव पार्‍यो । आज होला कि भोलि होला कि भनी पर्खिंदै बसियो । अब यस्तै हो भने २ वर्षसम्म ट्रेकिङ पहिलेकै अवस्थामा फर्किनेवाला छैन । अब विकल्प खोज्दैछु ।’
डेढ दशक श्रम र पसिना खर्चिएको ट्रेकिङ क्षेत्र छोडेर उनले कुन विकल्प रोज्दै छन् त ?
जिज्ञासामा उनले तुरुन्तै विकल्प पनि रोजिसकेको सुनाए : विदेश जाने वा नेपालमै कृषि कर्म थाल्ने ।
दाङको बिजौरी गाविस २ (हाल तुल्सीपुर १९) मा २०३५ सालमा जन्मिएका हुन्, बावुराम । घरको आयश्रोत कमजोर भएकोले उनी कामको खोजीमा सन् २००४ मा पोखरा आएका रहेछन् । त्यसबेला हातमुख जोर्न घर बनाउने काममा लागे । ढुंगा, सिमेन्ट, बालुवा सकिनसकी बोके । अलिअलि पैसा जोहो गर्दै दाङमा रहेको घरपरिवारलाई पठाउने गर्थे । त्यसको २ वर्षपछि २००६ मा उनले पोखराको एक कम्पनीमा सुरक्षागार्डको काम पाए । मासिक १५ सय रुपैयाँमा दैनिक १२ घण्टासम्म खटिनुपथ्र्यो । महिनावारी काम गरेर आउने तलब कोठाभाडा, रासनपानीमा ठिकै हुन्थ्यो । त्यति चित्तबुझ्दो लागेन उनका लागि । जसोतसो २ वर्ष धकेले । त्यसपछि ट्रेकिङ क्षेत्रतिर छिरेका हुन् । पोखरा बस्दै आएका श्रीमती, १ छोरा र १ छोरीका सहारा हुन्, उनी ।
ट्रेकिङ क्षेत्रमा पोर्टर बनेर धेरै भारी बोकेका उनले पछि ट्रेकिङ एजेन्ट्स् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को संयोजनमा भएको ३५ दिने ट्रेकिङ गाइडको तालिम लिने अवसर उनलाई मिल्यो । सशुल्क सो तालिमका लागि उनले ८ हजार रुपैयाँ तिरेका थिए । सन् २०१४ मा सो तालिमपछि उनी ट्रेकिङ गाइड बने । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, गोरखाको मनास्लु, रसुवाको लाङटाङ, म्याग्दीको धौलागिरी, मुगुको रारा ताल, डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो, कास्कीको माछापुच्छ्रे लगायत प्रमुख क्षेत्रमा उनले कैंयौँ पटक ट्रेकिङ गएको बताए ।
ट्रेकिङ गाइड हुँदा महिनामा एक डेढ लाख कमाउने बावुरामले कोरोना महामारीले बेरोजगार बनेपछि घरव्यवहार चलाउन ५ लाख ऋण काढिसकेका छन्
त्यसको केही वर्षपछि उनले आफ्नै नाममा ट्रेकिङ कम्पनी खोलेर सोही कम्पनीमार्फत विभिन्न मुलुकका पर्यटकलाई पदयात्रा लगेको बताए । यसरी उनले मासिक एक डेढ लाख रुपैयाँ सहजै कमाइ गर्दै आएका थिए । छोराछोरीलाई पोखराकै एक बोर्डिङमा पढाउन थालेका थिए भने सानोतिनो जग्गा जमिन पनि जोडेका थिए । हाल पोखरामा भाडामा बस्दै आएका बावुरामले कोरोनाका कारण व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित हुँदा पूर्ण रुपमा बेरोजगार बनेका हुन् । स्वदेशी पर्यटक दसैंतिहारको लामो छुट्टिको मौका पारेर विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न निस्के पनि पहिलेजस्तो गरी विदेशी पर्यटक कहिले आउँछन् ठेगान छैन ।
उनको ट्रेकिङ कम्पनी हाल बन्द छ । ट्रेकिङ कम्पनी रहेको घरभाडा समेत तिर्न नसकेर सामान उठाएर आफू बस्ने कोठामै ल्याएको बताए । घर व्यवहार चलाउन ५ लाख रुपैयाँ ऋण काढिसकेका छन् । संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका बावुराम भन्छन्, ‘जीवन आधा सन्चो, आधा बिसन्चो अवस्थामा छ ।’
बिसन्चोको कुरा त ट्रेकिङ नै रह्यो । तर आधा सन्चो के हो ?
मनभरी दुःख सहेर पनि हास्न नछाडेका बावुरामले भने, ‘परिवारलाई समय दिन सकिएको छ । बच्चाहरुको केयर गर्न सकिएको छ ।’ बावुराम जस्तै ट्रेकिङ गाइडको तालिमप्राप्त व्यक्ति पोखरा क्षेत्रमा १ हजार हाराहारीमा छन् । तर अधिकांशले वैकल्पिक पेसा रोजिसकेका पाइन्छ ।
बावुराम भन्छन्, ‘लकडाउन हटिसकेपछि अहिले आन्तरिक पर्यटक भने बढेका छन् । तर आन्तरिक पर्यटक होटल, रेस्टुरेन्टको लागि मात्र हो । आन्तरिक पर्यटकलाई अनिवार्य गाइड चाहिँदैन । विदेशीका लागि नौलो ठाउँ भएकोले गाइड लैजान चाहन्छन् र उनीहरु पैसा तिर्ने क्षमता पनि राख्छन् । विदेशी पर्यटक नआएसम्म ट्रेकिङ चल्दैन ।’
उनका अनुसार नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कोरोना लगायतका महामारी हुनुहुँदैन । शान्तिपूर्ण वातावरण तथा राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ । साथै नेपालको सन्दर्भमा सडक एकदमै राम्रो र यातायातको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
यसैबीच, टान गण्डकी अध्यक्ष सुशीलराज पौडेलले अब यो सिजन पनि खेरै गएको बताउँछन् । उनले आगामी सिजन कुर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘ट्रेकिङ व्यवसाय नहुनु भनेको ट्रेकिङको सबै जना म्यानपावर बेरोजगार बस्नु हो । लगानीको कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । टर्न ओभर (कारोबार) नहुँदा कर तिर्न समेत धौधौ हुने अवस्था छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘घरभाडासमेत तिर्न नसक्दा पोखरा क्षेत्रबाट २५ प्रतिशत व्यवसायी बिस्थापित भइसकेका छन् । आफ्ना स्टाफ पाल्ने त कुरै छोडौं, आफू नै कसरी पालिने भन्ने अवस्था छ ।’ टान गण्डकीमा १ सय ७० जना सदस्य आबद्ध छन् ।